တစ်လစာ ဟောကိန်း . . 1.6.2019 မှ 30.6.2019 အထိ…!
15/06/2019 Yan Naing 0
တစ်လစာ ဟောကိန်း . . 1.6.2019 မှ 30.6.2019 အထိ…! တနင်္ဂနွေ ၆လပိုင်းမှာ အချစ်ရေး အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေ မလိုလိုနဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်တက်တယ် ။အချစ်ရေး ညံ့နေပါ သေးတယ် အလိမ်ခံရ တက်တယ် အလုပ်ကိစ္စကြောင့် သော်လည်ကောင်း အခြား လူမှုရေး Continuous reading
အမျိုးသမီးထုကြား ရေပန်းစားတဲ့ ဆယ်လီ စံပြခင်ပွန်း (၈)ယောက်
15/06/2019 KPST 0
အမျိုးသမီးထုကြား ရေပန်းစားတဲ့ ဆယ်လီ စံပြခင်ပွန်း (၈)ယောက် အမျိုးသမီးထုကြားမှာ နာမည်ကြီးတဲ့ အိမ်ထောင်သည် အနုပညာရှင်ဆယ်လီ အမျိုးသားတွေရှိပါတယ်။သူတို့ရဲ့ အနုပ ညာအပြင် နာမည်ကြီးရတဲ့ တခြားနောက်ထပ် အကြောင်းအရင်းတစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့ ဇနီး ဖြစ် သူအပေါ် သစ္စာရှိမှု၊ကြင်နာဂရုစိုက်မှု၊ခင်ပွန်းကောင်းပီသတဲ့၊သား၊သမီးရှိတဲ့ သူတွေဆိုရု ဖခင်ကောင်းပီသတဲ့ အပြုအ မူတွေ Continuous reading
သက်ကြီးလူရွှင်တော် တစ်ဦးလျှင် (၁၂) သိန်း နှုန်းနဲ့ လှူဒါန်းနေတဲ့ ခင်လှိုင်
15/06/2019 Thu Yay 0
သက်ကြီးလူရွှင်တော် တစ်ဦးလျှင် (၁၂) သိန်း နှုန်းနဲ့ လှူဒါန်းနေတဲ့ ခင်လှိုင် ဟာသ သရုပ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းထားနိုင်သူတွေထဲမှာ ခင်လှိုင်လည်း အပါအဝင်ပါ။ ခင်လှိုင် ၊ ဒိန်းဒေါင်အဖြစ် တွဲပြီးမြင်ခဲ့ကြပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒိန်းဒေါင်က နာမည် တဖြည်းဖြည်း လျော့သွားပါတယ်။ ခင်လှိုင်က လက်ရှိမှာတော့ ဇဝနဖောင်ဒေးရှင်းကို Continuous reading
သေလုနီးပါးဖျားနာနေတဲ့ စွန့်ပစ်ကလေးကို မိခင်တစ်ဦးလို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သူနာပြုလေး
သေလုနီးပါးဖျားနာနေတဲ့ စွန့်ပစ်ကလေးကို မိခင်တစ်ဦးလို ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ သူနာပြုလေး ကျွန်တော်တို့ဟာ အိမ်မှာနေတဲ့အခါ မိဘတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာနေရပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ စာသင်ကျောင်းရောက်တဲ့အခါ ဆရာမတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှု၊ ဆေးရုံဆေးခန်းတက်ရောက်တဲ့အခါ သူနာပြုတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုတွေကို ခံယူရတာကြောင့် သူတို့တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ “ယာယီမိခင်”လို့တောင် ဆိုရမလိုပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က LunLun အမည်ရှိ ကလေးတစ်ယောက်ဟာ Continuous reading
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက သဝန်တိုပြီး ပြန်ဂရုစိုက်လာအောင်လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း(၄)မျိုး
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက သဝန်တိုပြီး ပြန်ဂရုစိုက်လာအောင်လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်း(၄)မျိုး မိန်းကလေးတွေက စမ်းသပ်ရတာကို ကြိုက်ကြတယ်။ သူတို့ချစ်သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး စမ်းသပ်ချင်ကြတယ်။ ချစ်သူမဖြစ်ခင်ကလည်း “တကယ်ချစ်တာ ဟုတ်၊မဟုတ်” စမ်းသပ်ကြသေးတယ်။ ချစ်သူဖြစ်သွားတော့ “ချစ်ရင် သဝန်တိုရမယ်” ဆိုပြီး စမ်းသပ်ကြတယ်။ တချို့မိန်းကလေးတွေက သူတို့ရဲ့ချစ်သူ သဝန်တိုတတ်တာက သူတို့ကိုချစ်လို့ဆိုပြီး Continuous reading
ကလေး ၂၆ ယောက်မွေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခေတ်သစ်ရှင်မွေးလွန်း
ကလေး ၂၆ ယောက်မွေးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခေတ်သစ်ရှင်မွေးလွန်း ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ ပရိသတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားမယ့် ခေတ်သစ် ရှင်မွေးလွန်း အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ဒေါ်ခင်မာမြင့်ဆိုသူက သူမရဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ အခုလက်ရှိမှာ ကလေး ၂၆ ယောက်ကို ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်လဲဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ လူတွေကတော့ ပြောကျတာပေါ့ ရှင်မွေးလွန်း၊ Continuous reading
နေအိမ်အတွင်း တီဗွီကြည့်နေစဉ် ဓါးဖြင့် အထိုးခံရ ၁၅..၀၆..၂၀၁၉ နေအိမ်အောက်ထပ်ဧည့်ခန်းတွင် တီဗွီကြည့်နေသည့် အသက် ၅၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီးဆရာဝန်တစ်ဦး ဓါးဖြင့်အထိုးခံရမှု….. ဇွန်လ ၁၂ ရက် ည ၁၀နာရီကျော်အချိန်က မန္တလေးမြို့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ၂၈လမ်း၊ ၇၉×၈၀လမ်းကြားရှိ သားဖွားဝင်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်….. ဆ Continuous reading
ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပထမ ရရှိသော မသဇင်ဝင်းအား ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ချီးမြင့်
ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပထမ ရရှိသော မသဇင်ဝင်းအား ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ချီးမြင့် မီးမရှိတဲ့ ရွာကနေ ကျူရှင်မယူဘဲ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ဝိဇ္ဇာဘာသာတွဲကို မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ပထမ ရရှိသော တောက်တဲ့ရိုး (အ.ထ.က) ကျုံပျော်မြို့နယ်မှ မသဇင်ဝင်းအား ငွေကျပ် သိန်း ၅၀ ချီးမြင့်…. Continuous reading
တရုတ်ရိုးရာ(၁၂)ရာသီခွင်စက်ဝန်းကနေ မွေးနှစ်အလိုက် ပြောပြမယ့် သင့်အကြောင်း။
တရုတ်ရိုးရာ(၁၂)ရာသီခွင်စက်ဝန်းကနေ မွေးနှစ်အလိုက် ပြောပြမယ့် သင့်အကြောင်း။ တရုတ်ရိုးရာပြက္ခဒိန်မှာ တစ်နှစ်စာကို ရာသီခွင်စက်ဝန်း တိရစ္ဆာန်(၁၂)ကောင်ထဲက တစ်ကောင်နဲ့ သတ်မှတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်ဟာ လ,အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတွက်ချက်ကြတာကြောင့် တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ် ကျတဲ့အကောင်မတူပါဘူး။ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကိုတော့ များသောအားဖြင့် ဇန်နဝါရီ(၂၁) ရက်ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ(၂၀) အတွင်းကျင်းပကြလေ့ရှိပါတယ်။ မနှစ်က ကြက်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်ဟာ Continuous reading
ငိုရလွန်းလို့ မျက်လုံးတွေတောင် ယောင်နေပြီဆိုပြီး သနားစဖွယ်ပြောလာတဲ့ နှင်းနွေ ။
ငိုရလွန်းလို့ မျက်လုံးတွေတောင် ယောင်နေပြီဆိုပြီး သနားစဖွယ်ပြောလာတဲ့ နှင်းနွေ ။ လတ်တလော ပြသနေတဲ့ “မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ရရှိနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး နေခြည်ရွှန်းလက်က တစ်နေ့ တစ်ခြား အောင်မြင်မှု တွေများစွာ ရရှိ ပိုင်ဆိုင် ထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။ Continuous reading